Wenger Oo Ku Tilmaamay Guuldaradii Chelsea Midii Ugu Xumayd Ee Uu La Kulmo Abid
HomeEnglandWenger Oo Ku Tilmaamay Guuldaradii Chelsea Midii Ugu Xumayd Ee Uu La Kulmo Abid
Tababaraha kooxda Arsenal ayaa aqbalay inuu isagu ka masuul ahaa guuldaradii 6-0 ka ahayd ee ay Stanford Bridge ku baday Chelsea kulankiisii 1000 aad ee intii uu ciyaaraha ku soo dhex jiray.
Laylyaha kooxda Gunners wuxuu ku tilmaamay guuldaradani inay ahayd midii ugu xumayd ee uu waligii la kulmo , waxaanu qirtay in kooxdiisa la qariyey oo ay awoodi waayeen inay madaxa kor u hinjiyaan daqiiqadihii tirsanaa ee ciyaartu socotay.
“Guuldaradani waxay ku timid khalad kayga, aniga ayaa qaatay dhamaan masuuliyadeeda, .” ayuu Wenger ku yidhi Idaacada BBC qaybteeda ciyaaraha.
Warbaahinta kale oo uu shir jaraa’id kula hadlayna wuxuu kaloo ku yidhi:- “Uma malaynayo inay jirto wax badan oo aan kaga sheekeeyo khaladaadkii aanu samaynay. maanta waxaa na qabsaday wacdaro yaableh.” ayuu yidhi.
“Jawaabta aanu ka bixino kulanka Habeenka Salaasada uun baa la eegi doonaa ( Ciyaarta ay wajahayaan Swansea).”
dhinaca kale wuxuu Tababare Arsene Wenger si weyn u cambaareeyey khaladkii garsooruhu ciyaarta kaga saaray Kieran Gibbs.
Wenger wuxuu ku dooday inaanu garsooruhu arkaynin kubada uu gacanta taabsiiyey Chamberlain, khaladna ay ahayd inuu digniin casaan ah kaga jawaabo.
“Waxaan aaminsanahay inay kubadaasi gacan ahayd. laakiin garsooruhu muu arkaynin. kubadii wey baxday , waxay ila tahay in cida kubada gacanta kaga saartay uu ahaa Chamberlain.
“Ma garanayo cida soo tilmaantay garsooraha inay kubadaasi gacan ku dhacday taas oo aanu arkaynin. Dabcan waxay ahayd niyad jab weyn waxa maanta nagu dhacay. laakiin waxa loo baahan yahay inaan kulanka xiga guul ka gaadhno.”
Seedorf Oo La Caydhiyey Iyo Inzaghi Oo Loo Dhiibay Ac Milan
Garsoorihii Dhexdhexaadiyey Kulankii Chelsea Vs Arsenal Oo Raaligelin Bixiyey Iyo Gunners-ka Oo Rafcaan Qaatay
23/03/2014 Abdiwahab Ahmed
Barca oo dirqi kaga badbaaday guul La’aantii 4-aad oo xidhiidh ah